Pfungwa iyi inoratidza kuti iyo Mamiriro ekunze app ingaite sei mu iPadOS | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 27/04/2022 17:00 | iOS, iPad
iPadOS Yakauya seyayo sisitimu yekushandisa yePadad makore mashoma apfuura. Nekudaro, kusvika panguva iyoyo iOS yakagadziridzwa kune zvinodiwa zveese iDevices nechinangwa chekupa inowedzera yakazara ecosystem. Asi pakanga pane zvimwe zvairambidzwa. Kwemakore akawanda, vashandisi vakamirira iyo yepamutemo Mamiriro ekunze application kuti isvike pane hombe skrini yePad. Kusiyana nezvaitarisirwa, hatisati tamboona kupenya kwetariro yekuti Apple ichaunza iyo app kuPad. Iyi pfungwa nyowani inoratidza kuti iyo Mamiriro ekunze app ingaite sei paiPad uye ndeapi mamwe maficha anogona kuunzwa.
Ko iPadOS 16 ichave iyo yekuvandudza inosanganisira iyo Mamiriro ekunze app yePad?
Iyi pfungwa nyowani yakaburitswa naTimo Weigelt mukati Behance inoratidza izvo iyo Mamiriro ekunze app angaite paiPad. Pakutanga kutarisa inoita sekopi yakapusa pakati peiyo iOS app pane yakakura zvishoma skrini. Nekudaro, misiyano midiki inounzwa mukati meiyo pfungwa yaizopa makiyi ekusiyanisa maviri maapplication.
Chekutanga, mabhuraki eruzivo anogona kugadzirwa sekunge ari majeti nekuwedzera, semuenzaniso, 'kunaya' kana 'kunanga kwemhepo'. Nebasa iri taizobvumira gadzira masikirini enguva yakatarwa zvichibva pane data yatinoda kuziva chero nguva. Ndinozivawo yaizosuma imwe landscape mode sezvo iyo official app haina dhizaini yemamiriro. Iyi dhizaini yaizotaridzika zvakanaka pane iyo iPad skrini ine mbiri dhizaini dhizaini umo nzvimbo dzekubvunza dzainge dziri kurudyi uye ruzivo rwemamiriro ekunze kuruboshwe.
iOS 16 ichaunza shanduko huru kuFocus Modes
Kune rumwe rutivi, wedzera mepu itsva dzinofamba akasiyana neaya emhepo uye kunaya kwaizopa ruzivo rwakawanda kuvashandisi. Uye, pakupedzisira, chiratidzo chidiki chinowedzerwa kuti app yaizogadzirwa kuburikidza neCatlyst, iyo zvakare yaizobvumira kuunza iyo Mamiriro ekunze app kune iyo itsva macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Iyi pfungwa inoratidza iyo Mamiriro ekunze app angaite senge muiPadOS
Izvo zvakanakisa zvishongedzo zveako zvigadzirwa zveApple